Kabaha & Qalabka Qalabka Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Sida Kabaha looga Iibiyo Dukaamada La Adeegsaday
“Marwalba waxaan ahaa qof aad wax u iibiya. U adkaysan maayo inaan boqolaal rodol ku bixiyo dharka naqshadeeye. Waxaan ka dukaameystaa dukaamada gacanta labaad ee Waddada Portobello waxaan aadaa Sue Ryder. “Ashley Jensen Haddii aad hadda marayso xaalad dhaqaale oo xun, hubaal waad la heshiin doontaa iyada! Qoraalkan, waxaad […]Read More
Soosaarayaasha Kabaha Qoob-ka-ciyaarka ee Raadinta Isku-habboon
Miyaad ka daashay kabaha qoob-ka-ciyaarka ah ee aan raaxo lahayn ama xanuun badan? Waan ogahay, waa wax laga xumaado in la xidho iyaga! Waxaad u baahan doontaa inaad ogaato halka aad ka iibsan karto kabo raaxo leh oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan si aad ugu raaxeysato qoob-ka-ciyaarkaaga. Kabaha qoob-ka-ciyaarka waa in laga doortaa alaab-qeybiyeyaal kala duwan. Kabaha saxda ah ee saxda ah, laga bilaabo…Read More